Burma Campaign UK မှ မဝေနှင်းပွင့်သုန်၏ မိန့်ခွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » Burma Campaign UK မှ မဝေနှင်းပွင့်သုန်၏ မိန့်ခွန်း
Burma Campaign UK မှ မဝေနှင်းပွင့်သုန်၏ မိန့်ခွန်း
Posted by smytu1996 on Oct 6, 2010 in Myanma News, Opinions & Discussion, Politics, Issues, Press Announcements |5comments
ဖိအားမှန်သမျှကို သုံးဖို့ လိုပါတယ် ဝေနှင်း စက်တင်ဘာ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁ဝ
<<<ဖေဖေ့ကို ကျမ ပထမဦးဆုံး မြင်တွေ့ဖူးတာကတော့ သံတိုင်တွေကြားက တဆင့် တွေ့ရတဲ့ ထောင်ထဲက အခန်းလေးထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမက ၄ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဖေဖေက ၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့် အကျဉ်းကျခဲ့ပါတယ်။ အခု နောက်ထပ် တခါ ငြိမ်းချမ်းစွာ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် အရေးအခင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့လို့ ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်ခွဲ ကျခံနေရပါတယ်။ ဖေဖေက ကျန်းမာရေး မကောင်းပါဘူး။ နှလုံးရောဂါ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ ဆက်လက် အသက်ရှင်ဖို့ အတွက် လိုနေတဲ့ ဆေးဝါးကုသခွင့် မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမ ဖေဖေဟာ မြန်မာပြည်က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၂ဝဝ ကျော်ထဲကမှ တဦးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းသားတွေ အများအပြား နှိပ်စက်ခံနေရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဆိုးရွားလှတဲ့ အခြေအနေအောက်မှာ ရှိနေကြပြီး သင့်တော်တဲ့ ဆေးကုသခွင့်တောင် မရကြပါဘူး။
ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီး ပြီးသွားရင် ကျမအဖေတို့ကို ထောင်ထဲ သွင်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေ အပါအဝင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ထောက်ပံ့ပြီး မတရား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေ အားလုံး တရားဝင် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ တခါတလေ ကျမမှာ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့သလောက် နီးပါး ခံစားရမိပါတယ်။ တခါတလေ ကျမအဖေကို ကျမတသက် ဘယ်တော့မှ ပြန်တွေ့နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမဟာ ကျမအဖေရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုကို အမှတ်ရနေပါတယ်။ သူဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေဒနာ ခံစားနေရပါစေ သူဘယ်တော့မှ ယုံကြည်ချက်ကို စွန့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကျမ သိနေတယ်။ ကျမတို့ဟာ လွတ်လပ်မှုရဲ့ အောင်ပွဲကို ဆင်နိုင်မယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ ဒီအတွက် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အကူအညီကို လိုအပ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ဟာ တောင်အာဖရိကကို အကူအညီပေး ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက်လည်း အကူအညီ ပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။>>>>original source:BBC World
ကျေးဇူးဗျာ ကျနော်မနက်ထဲက ဒီမိန့်ခွန်းကိုလိုက်ရှာနေတာ
youtube ကလဲဝင်လို့ မရဘူးလေ ခုတော့အဆင်ပြေသွားပီ
၊စက်တင်ဘာ လ ၂၇ ရက်နေ့ က အင်္ဂလန် နိုင်ငံ မန်ချက်စတာ မြို့ တွင် ကျင်းပသည့်
ဗြိတိသျှ ပါတီ ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် လေဘာ ပါတီ ညီလာခံဉ် အသက် ၂၂ နှစ် အရွယ်ရှိ မဝေနှင်းပွင့်သုန် ပြောကြားသည့် မိန့် ခွန်းသည် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်ပြောကြား သော်လည်း လူငယ်များ နိုင်ငံရေး အရ အင်အား တက်ကြွှဖွယ် ဖြစ်ပြီး ၊ထိုမိန့် ခွန်းကြောင့် ပင် လူငယ်များ နိုင်ငံရေး ကို ပိုမို စိတ် ၀င်စားလာကြသည် ဟု သိရသည်။
ပြင်သစ် နိုင်ငံ ပါရီမြို့ဆောဘွန်း တက္ကသိုလ် တွင် ပညာ သင်ကြားနေ သည့် ကို ဒူးရွှမ့် အောင်အောင် က “ဝေနှင်းပွင့်သုန် ရဲ့ မိန့် ခွန်းက လူငယ်တွေ ရဲ့ အသံ ကို ကိုယ်စားပြုတာပဲ ၊
လူငယ်တွေ ပြောချင်တာ ကို သူထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တာပဲ ၊အရင် မြန်မာ အတိုက်အခံတွေ
အခု လို နိုင်ငံတကာ အခမ်းအနားမှာ မိန့် ခွန်းပြောတာတွေ ကြည့် ဖူးတယ်။ ငိုတယ့်သူက ငို ကြ၊ ရုပ်ဆိုးဆိုး
နဲ့အကို ကြီး တစ်ယောက် ဆို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေး ဖို့ ဖိအားပေးခိုင်းတာ ပြောရင်း နဲ့ 
ဘယ်တွေ ကို ရောက်သွားမှန်း မသိဘူး၊နောက် လူငယ်တစ်ဦးပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လ လောက်က ပြောသွားတဲ့ လန်ဒန် က အကို တစ်ယောက်ကတော့ မြွှေအလမ္မာယ် ဆရာလိုလို ၊ဆေးကြောင်နေသလိုလို ဝေနှင်းပွင့်သုန်မိန့် ခွန်းကတော့ ကောင်းတယ်” ဟု ပြောသည်။
Ko Sithu says:
Ma Wai Nhin Pwint Thawn is hero of ours.She talked the voice of ours.So, we are very very thank her. We always wish she and her dad will be meet with freely.
ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ရဲရဲဝင့်ဝင့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ မဝေနှင်းကိုလည်း လေးစားမိပါတယ်…………
ဒါပေမဲ့ သူဟာ မွတ်စလင်ဆိုတာတော့ မေ့မနေကြနဲ့နော..
ကျနော်တို့လူမျိုးက နွား လိုဘဲ အခွင့်အရေး အချိန်အခါကို ရိုးရိုးမျက်စိ နဲ့ကြည့်တာ…
မွတ်စလင်က ကျားချောင်းချောင်းတဲ့ ကျားငစဉ်းလဲဆိုတာတော့ အမြဲနှလုံးသွင်းထားကြပါ ခင်ဗျာ။